Nlekọta nke ndị na-emepụta ihe na ndị na - ebubata ya - China Nlekọta Ndị Na-arụ Ọrụ Nke Onwe
Nlekọta Onwe Nke Onwe
Kojic Acid & Nkesa
Kojic Acid Nyocha
Usoro PVP K
Poly (Methylvinylether / Maleic Acid) Ngwakọta Ngwakọta
Poly (MethylvinyletherMaleic Acid) Ọkara Esters Copolymer
Ndị ọzọ na-arụ ọrụ
Keratin nke Hydrolyzed
Lactose a gbara gburugburu
Dgha Lactose Ihicha
Chemicals nke ụlọ ọrụ
Mgbaze / Intermediates
Tetra-Needle Dị ka Zinc Oxide Whisker
DL -Panthenol ntụ ntụ
DL-Panthenol bụ nnukwu humectants, na-acha ọcha ntụ ntụ, soluble na mmiri, mmanya, propylene glycol.DL-Panthenol a makwaara dị ka Provitamin B5, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na mmadụ intermediary metabolism. Erughị eru nke Vitamin B5 nwere ike ịkpata ọtụtụ ọrịa dermatological.DL-Panthenol na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nhazi ọ bụla.DL-Panthenol na-echekwa ntutu, anụ ahụ na mbọ. Na anụ ahụ, DL-Panthenol bụ miri emi na-emetụta mmadụ nke ukwuu.DL-Panthenol nwere ike kpalite uto nke epithelium ma nwee onye ...
DL-Panthenol 50% bụ nnukwu humectants, ọ bụ ihe na-enweghị ntụpọ maka mmịcha odo viscous na-acha odo odo, soluble na mmiri, mmanya, propylene glycol.DL-Panthenol makwaara dị ka Provitamin B5, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na mmadụ intermediary metabolism. nke vitamin B5 nwere ike ibute otutu oria dermatological.DL-Panthenol etinyere ihe dika ihe di iche-iche nke ihe eji edozi aru. DL-Panthenol lebara ntutu, anụ ahụ na mbọ anya. Na anụ, DL-Panthenol bụ ihe omimi miri emi na-emetụta mmadụ. DL-Panthenol nwere ike kpalite Groo ...
DL-Panthenol 75% bụ nnukwu humectants, ọ bụ ihe na-enweghị ntụpọ maka mmịcha odo viscous na-acha odo odo, soluble na mmiri, mmanya, propylene glycol.DL-Panthenol makwaara dị ka Provitamin B5, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na mmadụ intermediary metabolism. nke Vitamin B5 nwere ike ibute otutu oria dermatological.DL-Panthenol etinyere ihe dika ihe di iche-iche nke ihe eji edozi aru. DL-Panthenol na-eche ntutu, akpukpo aru na ntu. Groo ...
D-Panthenol bụ ihe na-emepụta mmiri viscous nke pantothenic acid ma mepụtara ya maka ngwa dị iche iche. Nnọọ soluble na mmiri, na-edozi ngwa ngwa n'ime mmanya, soluble na glycerol, ntakịrị soluble na ether, na-enweghị ike ịgbakwunye na mmanụ nri, mmanụ ịnweta na abụba. Ngalaba Nka na ụzụ: Nchọpụta A na-eme ka USP Identification B kwekọọ na USP Identification C kwekọrọ na USP Ọdịdị na-enweghị ntụpọ, Viscous na mmiri mmiri doro anya (Anhydrous ndabere) 98.0% ~ 102.0% Speci ...
D-Panthenol 75% bụ ihe na-emepụta mmiri viscous nke pantothenic acid ma mepụtara ya maka ngwa ngwa. Nnọọ soluble na mmiri, na-edozi ngwa ngwa n'ime mmanya, soluble na glycerol, ntakịrị soluble na ether, anaghị agbaze na mmanụ nri, mmanụ ịnweta na abụba. . Ngalaba Nka na ụzụ: Ọdịdị na-enweghị ntụpọ, viscous na mmiri doro anya nchọpụta ezigbo mmeghachi omume nnwale (HPLC) 75.0 ~ 78.5% mmiri (Karl Fischer) Ọ bụghị ihe karịrị 0.1% Ntugharị Ntugharị Specific + 29 ° ~ + 31.5 ° Am ...
D-Calcium Pantothenate bụ nnu calcium nke vitamin B5 na-edozi mmiri, ebe a na-ahụkarị ya na osisi na anụ ahụ anụmanụ nwere ihe antioxidant. Pentothenate bụ akụkụ nke Coenzyme A na akụkụ nke vitamin B2. Vitamin B5 bụ ihe na-eto eto ma dịkwa mkpa maka ọrụ metabolic dị iche iche, gụnyere metabolism nke carbohydrates, protein, na fatty acids. Vitamin a tinyekwara na njikọ nke cholesterol lipids, neurotransmitters, steroid hormones, na hemoglo ...
Ascorbyl Tetraisopalmitate, nke a na-akpọ Tetrahexyldecy Ascorbate, ọ bụ molekul sitere na vitamin C na isopalmitic acid. Mmetụta nke ngwaahịa a yiri nke vitamin C, nke kachasị mkpa ọ nwere ike ịme dị ka antioxidant. Ascorbyl Tetraisopalmitate na-ebelata nrụpụta nke ndị na - eme ọghọm, nke na - enye aka na mmebi sel mgbe ọ gbasara UV ma ọ bụ ihe egwu kemịkalụ.Mgbatị ahụ nwere ike ichebe megide mmebi DNA na ime ka ọchịchịrị gbaa site na ikpughe UV. Na, anụ visual ịrịọ ...
Biotin akpọkwara dị ka D-Biotin, Vitamin H, Vitamin B7, ọ na-acha ọcha ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ na-acha ọcha, kristal ntụ ntụ ma ọ bụ colorless kristal, dị nnọọ ntakịrị soluble na mmiri, mmanya, bara uru anaghị edozi na acetone. Nka na ụzụ Njikere Ọdịdị Njirimara ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha (A, B, C) Na-emetụta USP Assay 97.5% ~ 100.5% Adịghị Ọdịmma Nke Onwe Onye: ọ bụghị ihe karịrị 1.0% Mkpụrụ Ọha: ọ bụghị karịa 2.0% Ntugharị Pụrụ Iche + 89 Celsius ~ + 93 ° Resi ...
Coenzyme Q10 gụnyere dị ka akụkụ nke mitochondria na mmepụta ume nke sel. O nwekwara mmetụta antioxidant, nke a na-ejikarị na physiology, ahịa ọgwụ, ihe ịchọ mma na nchebe ahụike.Ọ na-acha odo odo ma ọ bụ na-acha odo odo na-acha odo odo, na-enweghị isi, na-enweghị isi, na-adị mfe soluble na chloroform, benzene na carbon tetrachloride; soluble na acetone, aether, mmanụ ala; ntakịrị soluble na ethanol; insoluble na mmiri ma ọ bụ methanol.It ga-decomposed n'ime-acha uhie uhie bekee na ìhè, stabl ...
Magnesium Ascorbyl Phosphate bụ ezigbo vitamin C ndị ọzọ (L-Ascorbic acid mono-dihydrogen phosphate magnesium salt) nke na-adịghị adalata na usoro ndị nwere mmiri. akpụkpọ ahụ na-enwu gbaa ma na-enwu gbaa, na dị ka anti -inflammatory.Ọ bụkwa ihe nwere ike antioxidant.It a na-ewere dị ka ihe magburu onwe-adịghị agbakasị sakin ọcha ọcha na-egbochi mkpụrụ ndụ akpụkpọ mepụta melanin na ìhè ...
Sodium Ascorbyl Phosphate nke vitamin C, vitamin C dabere na sayensị na teknụzụ nke oge a maka nhazi nke akụrụngwa emere site na iji ngwaahịa a, ma ọ bụ ọnụ ma ọ bụ tinye ya n'ime anụ ahụ n'ime ahụ, nwere ike ịgbanye ngwa ngwa site na phosphatase iji nweta vitamin C, vitamin C na-arụ ọrụ physiological na biochemical pụrụ iche.Sodium Phosphate Vitamin C Vitamin C nwere arụmọrụ nke abụọ. Vitamin C nwekwara merie enwe mmetụta ọsọ ọsọ nke ìhè, okpomọkụ na metal ion, mfe oxidized sh ...
A maara Kojic Acid dị ka 5- hydroxyl -2- hydroxymethyl -1 na 4- piranone. Ọ bụ ihe na-adịghị ike acidic organic mere site gbaa ụka nke microorganisms.Fine tramperic acid bụ ihe na-acha ọcha ma ọ bụ odo dị ka kristal; mfe soluble na mmiri, mmanya na acetone, ntakịrị soluble na ether, ethyl acetate, chloroform na pyridine, unyi anaghị agbasa na benzene; usoro ihe omuma ya bu C6H6O4, Molecular weight142.1, Ebe na-agbaze153 ～ 156 ℃. Key teknụzụ oke ọdịdị White ma ọ bụ na-acha ọcha crystal Dị ka ...